एउटा अर्को प्रश्न तपाईले अर्को सर्वेक्षणमा सोध्नु पर्छ Martech Zone
एउटा अर्को प्रश्न तपाईले अर्को सर्वेक्षणमा सोध्नु पर्छ
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० शनिबार, मे 2, 2015 Douglas Karr
मेरो राम्रो मित्र क्रिस बगगट एक महान छ पोस्ट आज सर्वेक्षणको बारेमा। म क्रिससँग पूर्ण सम्झौतामा छु। कृपया यदि मलाई जानकारीको साथ केहि गर्न जाँदै हुनुहुन्न भने मलाई मेरो सल्लाह न सोध्नुहोस्। जसले मलाई चिन्छ उसले स्वीकार गर्दछ कि म मेरो राय प्रदान गर्न मन पराउँछु ... कहिलेकाँही गल्ती गर्न। मेरा साथीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि तिनीहरूले ममाथि भरोसा गर्न सक्छन्।
यसका लागि दुई कारणहरू छन्:
म एक भावुक व्यक्ति हुँ र खेलहरू खेल्नको लागि धेरै पाको हुँ। मैले घडीले टिक गरिरहेको देखेको छु, त्यसोभए झाडीको किनार किन मारियो!
यदि म सँधै के भन्न खोज्छु र के मैले भन्न खोजेको छु, तब मान्छेहरू सँधै मसँग उस्तै कथा प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरू जान्दछन् कि म उनीहरूलाई के सुन्नको निम्ति केहि कुरा भनिरहेको छैन।
तर ... यदि तपाईं मेरो सल्लाह माग्दै जानुहुन्छ भने, मलाई यो प्रेम गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्, र त्यसपछि निरन्तर यसलाई खारेज गर्नुहोस् ... तब म भविष्यमा तपाईंसँग मेरो समय लगानी गर्ने छैन। त्यो होइन कि तपाईं असहमत हुन सक्नुहुन्न, म अक्सर गलत हुँ। मेरो मतलब यो हो कि यदि तपाईंको प्रेरणाले मलाई बी एस गर्न चाहानुहुन्छ जस्तो लाग्छ म सराहना गर्दैछु, म तपाईंसँग मेरो समय बर्बाद गर्न चाहन्न। र म गर्दिन।
सर्वेक्षणहरू यस्तै हुन्छन्। म कुनै कम्पनीको बारेमा सचेत छैन जुन ग्राहकको पीडा बिन्दुहरू बारे सचेत छैन। तथ्य यो छ कि प्राय जसो कम्पनीहरूसँग त्यस्तो मानिस हुन्छ जसले उनीहरूको ग्राहकको सबै पीडा बिन्दुहरू बुझ्छन्, के मानिसहरूले रमाईलो गर्छन्, र के व्यक्तिहरू खडा हुन सक्दैनन्। समस्या यो हो कि हामी तयार नभएसम्म हामी सुन्न चिन्ता गर्दैनौं। वास्तवमै यो एक सर्वेक्षण हो - यसले तपाइँको ग्राहकलाई भनेको छ, "ठीक छ, म तपाइँको कुरा सुन्न तयार छु ... कृपया तपाइँलाई मेरो बारेमा के मनपर्दछ र के मनपर्दैन भनेर मलाई भन्नुहोस्।"
सर्वेक्षणले मापनको चरम फोकस गर्नु पर्छ। सटीक पक्षमा, मूर्ति प्रश्नहरू जुन मापन गरिएको प्रतिक्रियाको परिणाम हुन सक्छ महान हो। मलाई दरबारको शिष्टाचारलाई दर्जा दिन सोध्नु हास्यास्पद हो। सबै जना जान्दछन् कि तपाईंको दरवार भद्र छ कि छैन। मलाई कुन साइजको शर्ट लगाएर सोध्दैछ ताकि म पछ्याउन सकूँ र तपाईं ल्याउनमा म उत्कृष्ट छु। मलाई सोध्नुहोस् यदि मलाई एक बनाम बी मनपर्दछ भने सुपर हो ... विशेष गरी जब तपाईले मैले छनौट गरेको साथ कल गर्नुहुन्छ।
मापनको अर्को छेउमा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को साथी प्याट कोयलले एक पटक मसँग एउटा कथा साझा गरे जहाँ कम्पनीले उनीहरूको सर्वेक्षणमा केवल एक मात्र प्रश्न गरेको थियो ...
के तपाई हामीलाई साथीलाई सिफारिस गर्नुहुन्छ?
तथ्य यो हो कि तपाईंको कम्पनीमा कसैलाई के थाहा छ के सुधार गर्न सकिन्छ। तिनीहरू यो भन्न डराउँछन्। वा यो ठीक गर्न को लागी-इन हुन सक्दैन। वा, प्राय: जसो नभई तिनीहरू जान्दछन् कि यो फिक्स हुनेछैन किन त्यसोभए। यदि तपाईं आफ्नो कर्मचारीहरूको कुरा सुन्न गइरहनु भएको छैन भने, सम्भावना यो छ कि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूलाई सुन्नुहुन्न।
सर्वेक्षणहरू तपाईंको विश्वासहरूलाई 'समर्थन' गर्न चरा पनि हुन्। एक म्यानेजरलाई बताउनुहोस् शीर्ष १० चीजहरू जुन उनीहरूले तपाईंको छानबिनको आधारमा सुधार गर्नुपर्दछ र कहिलेकाँही तपाईं केवल एक पागल हुनुहुन्छ। तर ... तपाइँको ग्राहकहरुबाट केहि सय अनियमित नमूनाहरु प्रदान गर्नुहोस् जुन शीर्ष १० चीजहरू समर्थन गर्दछ, र अचानक सबैले सुन्नेछन्। त्यो दु: खी छैन? मलाई त्यस्तै लाग्छ!
म तपाइँको ग्राहकहरु संग संचार काट्न सल्लाह दिदैँ। एकदम विपरित, मँ तपाइँको ग्राहकहरु संग संचार मा FOCUS भन्दै छु। सर्वेक्षण संचार होईन। यो विरलै दुई-बाटो हो। त्यसोभए रोक्नुहोस्। तपाइँका कर्मचारीहरूलाई भन्नुहोस् ग्राहकहरूले के भनिरहेका छन् र यसलाई ठीक गर्नुहोस्।
र यदि तपाइँ साँच्चिकै उत्सुक हुनुहुन्छ कि तपाइँको ग्राहकहरु तपाइँको बारेमा सोच्न को लागी, एक साधारण प्रश्न पर्याप्त छ:
टैग: ग्राहक सर्वेक्षणएउटा प्रश्न सर्वेक्षणसर्वेक्षणसर्वेक्षण प्रश्नहरू
ओल्ड स्पाइस कहिले सुन्दर भयो?